साउन १७, सल्यान । नेपालमा बेसारको नयाँ जात विस्तार गरिएको छ । अदुवाबाली अनुसन्धान कार्यक्रम सल्यानको कपुरकोटले दुई वर्ष लामो अनुसन्धानपछि बेसारको दुई ओटा नयाँ जात पत्ता लगाएको हो । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्…
निर्जीव माटोको अचाक्ली भक्तिको आवरणमा सजीव मान्छेको अवमूल्यन हुँदा नेकपाका भुसालहरू किन मौन छन् ? किनभने तिनीहरू अघिल्ला पुस्ताका नेताहरूका अवगुणहरू ‘रेप्लिकेट’ गर्ने डरलाग्दो सम्भावनामा पुगेका छन् । आजसम्मको गतिविधि हेर्दा लाग्छ, दुई जना तान्त्रिक…
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. २ रामपुरका टेकवहादुर चौधरी गत वर्ष रासायनीक मलको जोहो गर्न बर्दिया सम्म पुगे। दाङमा मलको अभाव भएपछि आफन्तको सम्पर्कका आधारमा बर्दिया पुगेका उनले गत बर्षको धान खेती सपार्न जेनतेन मलको जोहो…
वायोमासलाई औद्योगिकीकरण गर्न सकिएमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सकिने काठमाडौँ, १२ साउन । मुलुकको ऊर्जाको मुख्य श्रोतको रुपमा रहेको वायोमासलाई परम्परागत ढंगबाट नभई आधुनिक र व्यवसायिक रुपमा उपयोग गर्न सकिएमा…